Wedzera Tweetwall kune Yako Inotevera Chiitiko Ne Hootfeed | Martech Zone
Wakamboda here kuva ne Tweet madziro muhofisi yako kana pachiitiko? Kune mhinduro shoma kunze uko, asi hapana inogona kunge iri nyore kushandisa se Hootsuite's Hootfeed. HootFeed chishandiso chiri nyore-kugadzirisa, icho chinopa hupenyu hweTwitter hwaunofarira nezve kurarama; kukurudzira vashanyi vako kuti vataurirane nezvikafu zvechiitiko. Nekuratidzira inoonekwa maTweets pazvikwiriso zvakapoterera chiitiko chako, iwe unogadzira iyo Tweet madziro kuti vaenzi vako vanogona kubatanidzwa nazvo.
Hootfeed inopa yakazara yakazara skrini inoyera iyo saizi kune chero saizi skrini, inosvibisa firita, uye inoenderana neyako brand.
Tags: hootfeedhootsuitetweet madzirotweetwall